Tuesday, 27 Nov, 2018 12:02 PM
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हिजोआज पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार, सम्पादकीय र टिप्पणीका कारण पक्कै पनि दुःखी भएको हुनुपर्छ । किनभने, उनी पहिलो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित हुँदा तिनै पत्रपत्रिकाले नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भनेर बडो गर्वका साथ ‘हेडलाइन’ समाचार छापेका थिए । गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति भएकी भण्डारीलाई विश्वका मिडियाले पनि चर्चाको शिखरमा पु¥याएका थिए । किनभने, नेपालको संविधानमा उल्लेखित समावेशी शब्दको राष्ट्र प्रमुखमा यो पहिलो प्रयोग थियो । तर, अहिले आएर तिनै राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरी प्रतिष्ठानको जग्गा र राष्ट्रपति कार्यालयको लागि नेपाल सरकारले सवारीसाधन खरिद गर्न बजेट छुट्याएको कुरालाई लिएर पत्रपत्रिकाले निकै उछालेका छन् । यसले नेपाली मिडियाको चेतनास्तर र दूरदर्शितालाई उजागर गरेको छ । किनभने, राष्ट्रपति भवनको विस्तार र त्यसको सेवासुविधाका विषय राष्ट्रपतिको चाहनाले हुने होइन । त्यो राज्यको आवश्यकताको कुरा हो । विश्वमा जहाँ पनि राष्ट्रपति भवन सभ्य र भव्य हुन्छ । यहाँ त राष्ट्रपति भवन नै छैन भने पनि हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय बसेको पुरानो भवनलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर राष्ट्रपति भवनको आवरण दिइएको छ । त्यो पनि भूकम्पका कारण चिराचिरा परेको अवस्था छ । त्यो जीर्ण भवनलाई आधुनिक सुविधासम्पन्न बनाउनु भनेको व्यक्तिको होइन, राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग गाँसिएको विषय हो । राष्ट्रपति कार्यालय भन्नासाथ विश्वका राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री र कूटनीतिक नियोगको प्रमुखहरु औपचारिक कार्यक्रममा आउने थलो हो । त्यस्तो ठाउँलाई विस्तार गर्नु राष्ट्रकै गौरवको कुरा हो । यस्तो कुरामा पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जाल सकारात्मक मात्र होइन रचनात्मक पनि बन्नुपर्छ । भारतकै राष्ट्रपति भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यहाँभित्र राष्ट्रप्रमुखका अति विशिष्ट पाहुनाहरुलाई बस्ने अतिथिगृह, बैठक कक्षदेखि विदेशी राष्ट्र प्रमुखको सम्मान गारतका लागि सुविधासम्पन्न प्राङ्गण सुविधा छ । त्यो प्राङ्गण वरपर सुन्दर फूलका बगैँचा छन् । यसो भन्दा आलोचना गर्नेहरुले भन्न सक्लान्– भारत ठूलो देश हो । त्यसको तुलना किन गर्ने ? देश ठूलो सानो भए पनि राष्ट्र प्रमुखको समान हैसियतको हुन्छ । विश्वभर राष्ट्रपति भवनको जुन मापदण्ड छ त्यसबमोजिम राष्ट्रपति भवन बनाउँदा नेपालीको इज्जत बरु बढ्ला, घट्दैन ।
राष्ट्रपति भण्डारीमा महंगो गाडी चढ्ने रहर भइदिएको भए सबै सुविधासम्पन्न गाडी छाडेर उनीले साठी लाख पर्ने इलेक्ट्रिक गाडी किन चढ्थिन् ? विश्वमै सैभन्दा सस्तो र इलेक्ट्रिक गाडी चढ्ने भण्डारी पहिलो राष्ट्रपति हुन् । चीनको बिवाईडीका अनुसार विश्वमै पहिलो पटक नेपालको राष्ट्रपतिले इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गरेर अनुकरणीय उदाहरण दिएका छन् । वातावरण सचेतनाका लागि यो एउटा राम्रो उदाहरण हो । अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले ‘कारगेट’मा बाहेक अन्य औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा त्यही इलेक्ट्रिक गाडी चढ्छन् । यसको चिनियाँ मिडियाले निकै प्रशंसा गरेको छ । तर, नेपालमा भने आफ्नै राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम भएको छ । कहाँसम्म भने राष्ट्रपतिका लागि गाडी किन्न पशुपतिनाथमा चन्दा संकलन गरिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । राष्ट्रपति भण्डारी केही वर्ष अगाडि जानकी मन्दिरको दर्शन गरेर फर्किएपछि विधवाले पाइला टेक्यो भनेर त्यहाँका जनताले जानकी मन्दिरको प्राङ्गण पानीले धोईपखाले । त्यो भन्दा पनि बौद्धिक दरिद्रता चन्दा संकलन गर्ने काममा देखियो । यसले हाम्रो चेतनास्तर कहाँ पुग्यो भन्ने कुरालाई संकेत गर्छ । यति ठूलो बलिदानीपछि नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममै मिडिया र सामाजिक सञ्जाल खनिने हो भने लोकतन्त्रको माध्यमबाट हाम्रो चेतनास्तर उठ्न कति समय लाग्ने हो र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहना कहिले पूरा हुने हो भनेर सोच्ने अवस्था आएको छ ।